Ogaden News Agency (ONA) – Cabdi Iley oo ah Nijaas aan la Daahirin Karin iyo Riwaayadaha Loo Alifayo
Cabdi Iley oo ah Nijaas aan la Daahirin Karin iyo Riwaayadaha Loo Alifayo
Waxaa jirta sheeko baraley (Folklore tale) ay dadka Ingriiska ah kala dhaxleen oo dhahaysa waxaa jiray qarniyadii hore nin la odhan jiray Robin Hood oo geesi ah oo qoysaska boqortooyada (Aristocrats) iyo dadaka maalqabeenka ah intuu ka dhaco waxay haystaan u qaybin jiray masaakiinta. Robin Hood boqortooyada iyo dadka maalqabeenka ah waa ka dambiile la raadiyo, dadka saboolka ahna waa geesi halyay ah oo xoolaha ay haystaan qoyskaa maalqabeenka ah uga soo dhaca oo u qaybiya lib iyo abaal la’aan. Hadday tahay miduu isaga samaysanayo iyo hadday tahay miduu gumaysiga ugu talagalayba, Cabdi iley wuxuu doonayaa dambiyada lama ilaawaanka ah ee shacabka uu ka galay in la iloobo oo sheeka baraley loo sameeyay dadweynaha uu laqsiiyo.
Inta aanan sii xulin mawduuca, aan isla fiirino qodobada laga midaysan yahay oo qofka raacsan Cabdi iley iyo midka kasoo horjeeda aanay isku diidi karin, si doodeena u noqoto mid maangal ah oo ka fog caadifad laab lakac ah.
Ogadenya waxaa kusoo duulay oo qabsaday Minilk oo kaalmo ka helay dawalidihii Yurub ee boobahayay Afrika.
Taariikdaa laga bilaabo ilaa maanta waxaa ka jiray Ogadenya iska caabin iyo diidmo xukuumadihii isga dambeeyay Itobiya.
ONLF waxay dhaxashay taariikhdaa halganeed ee ma’aha jabhadii bilowday halganka socda.
Itobiya oo ah/ahayd (midkaad aaminsan tahay) dawlad gumaysi waxay dagaal kula jirtay qof kasta oo dalka u dhashay oo kasoo horjeedsada xukunkeeda.
Waxay soo dhaweynaysay oy taageeraysay qofkasta oo dalka u dhashay oo kasoo horjeedsada kuwa diidan xukunkeeda.
Qodobada la’isku raacsan yahay way badan yihiin hadii la doonayo in lasii wado barnaamij dhan ayaa laga samayn karaa.
Cabdi iley wuxuu ahaa hogaanka amniga intaan laga dhigin horjoogaha kililka, jagadaa ayuuna ku muujiyay wuxuu u qaban karo Itobiya hadii faraha laga galiyo awooda dalka oo loo ogolaado inuu fuliyo wuxuu doonayo oo ahayd;
Sidaan horey u sheegnay qorshaha Cabdi iley loo dadajiyay wuxuu ahaa inuu reereeyo dagaalka gobanimadoon ee ka socda Ogadenya. Waxaan xusuus ahaan idiinku soo celinayaa si loo fahmo arintaa, maqaalo horey loogu qoray shabakadda ONA oo uu noosoo gudbiyay xubin muhiim ahaa oo kasoo goostay kana tirsanaa ciidankii ugu horeeyay ee loo tababaray Hawaarinta (Liyu Boolis). Waa maqaal taariikhi ah oo mudan in la xafido. Waxaad ku arki maqaalkaa waxay ka aaminsan yihiin Itobiya shacabka Ogadenya oo la mid ah waxay ku andacoon jireen gumaysigii ree Yurub markay kusoo duulayeen inay gumaystaan Afrika iyo dawladaha Asia. waxay sabab uga dhigeen duulankooda inay shucuubta Afrika ee cawaanka ah ree magaalaynayaan oy aadami-yeynayaan (humanizing). Sidoo kale ayay Itobiya waxay ku salaysay barnaamijka maskaxda lagaga maydhay dhalinyarada ay qasabka isugu keeneen ee loogu talagalay in lagu tababaro maleesiyada Hawaarinta barnaamij cinwaan looga dhigey in shacabka Ogadenya lagu samaynayo Dib u Dadayn (Re Humanization). Wuxuu yidhi xubunkan ka tirsanaa ciidankaa;
Cabdi iley oo ahaa Hogaanka Nabadgalyada markay tababarka dhamaysteen hadalada uu ku baraarujiyay ciidankaa siduu sheegay xubinkan wuxuu ahaa sidan;
Wuxuu kaloo sheegay in Da’uud Axmaar oo ahaa Horjoogaha kililka uu isaguna u sheegay maleesiyadii Hawaarinta in Hogaamiye wanaagsan loo doortay uu ula jeedo cabdi Ubo. Wuxuu yidhi; “Waa hogaamiyihii ugu haboonaa inuu gadh-qaado ciidan noocan ah”.
Waxaan kusoo koobayaa qaybtan inaad dib u akhrisaan maqaalkaa taariikhi ah saad u fahmataan Cabdi iley wuxuu yahay, dhibaataduu u gaystay shacabka iyo wuxuu ku mutaystay jagadan uu mudada dheer hayo. Saan ugu gudubno shaadhka cusub ee la doonayo in loo xidho suu u jilo Riwaayadda cusub ee gumaysiga alifayo, ama looga qariyo masraxa (the stage).
Qaybtii 1aad ee taxanahaa oo ka waramaya sidii loo asaasay ciidanka Hawaarinta iyo ujeedada laga lahaa halkan ka akhri. Muhiimada waa in aad kaydsato ood la socoto taariikhda dalka iyo dambiyada uu gumaysiga ka galay shacabkeena isagoo adeegsanaya Cabdi iley iyo Hawaarintiisa.
La soco qaybta ku xigta ee riwaayadaha cabdi iley loo alifayo.